त्यो लोगोमा हेर्नुहोस् !: २०१ Logo को शीर्ष लोगो डिजाइन प्रवृत्ति - Print Peppermint
त्यो लोगोमा हेर्नुहोस्: २०१ The को शीर्ष लोगो डिजाइन प्रवृत्ति
नोभेम्बर 28, 2019 | ब्रान्डिङ, ग्राफिक डिजाइन, लोगो डिजाइन
के तपाई आफ्नो लोगोलाई अर्को तहमा लैजान खोज्दै हुनुहुन्छ? यदि त्यसो हो भने, २०१ logo को शीर्ष लोगो डिजाइन प्रवृतिको बारेमा जान्नको लागि पढ्नुहोस्।
तपाईको लोगोले तपाईको बजारमा ठूलो प्रभाव पार्छ।
यसले तपाइँको बेच्ने कुराको संचार गर्दछ, तपाइँ यसलाई कसरी बेच्नुहुन्छ, तपाइँ कहाँ पुग्न चाहानुहुन्छ, र तपाइँको कम्पनीको मिशन र मानहरू पनि।
हामी जान्दछौं कि तपाई एउटा लोगो सिर्जना गर्न चाहानुहुन्छ जसले यसलाई हेर्ने सबैको चासो दिन्छ। तपाईं शीर्ष लोगो डिजाइन ट्रेंडको साथ तपाईंको लोगो पनि चरणमा भएको चाहनुहुन्छ।
एक मात्र समस्या?
तपाईलाई पक्का छैन कि लोकप्रिय के हो ग्राफिक डिजाइन र लोगो ट्रेंडहरू हुन्।
नडराउनुहोस् - हामीले तपाईंलाई कभर गर्यौं।
चाहे तपाईं पूर्ण रूपमा रिब्र्यान्डिंग गर्दै हुनुहुन्छ वा स्क्र्याचबाट तपाईंको व्यवसाय सुरू गर्दै हुनुहुन्छ, २०१ read को तातो लोगो ट्रेंडहरू पत्ता लगाउन पढ्नुहोस्।
१. धातुको उदय
सबैजना सधैं चम्किलो र नयाँ चीज चाहन्छन्।
त्यसोभए, केहि शानदार नयाँ उत्पादनहरू सुरूवात गर्न वा अपरणीय सेवाहरू प्रदान गर्नका साथै?
किन तपाइँको लोगो डिजाइन मा एक सानो बिलिंग थप्न छैन?
धातु - सुन, तामा, चाँदी, र शो को वास्तविक सितारा, गुलाब सुन, विलासिता र exclusivity को भावना संचार गर्न उत्तम तरिका हो।
तिनीहरू कार्यक्रम योजना कम्पनीहरु, कपडाको ब्रान्ड, हाउसवेयर, र अझ उच्च अन्त्य रियल ईस्टेट कम्पनीहरुका लागि आदर्श हुन्।
यद्यपि तपाईका सबै ग्राहकहरु तिनीहरुको मुखमा चाँदीको चम्चाको साथ जन्मेका थिएनन्, तपाईको लोगो निश्चित रूपले उनीहरुलाई उनीहरु जस्तै गरी महसुस गर्न मद्दत गर्दछ।
अर्को स्तरमा चीजहरू लैजान, जब तपाईं प्रमोशनल सामग्रीहरूमा तपाईंको लोगो प्रिन्ट गर्नुहुन्छ, यसलाई बढवा बनाउनुहोस् वा यसलाई एम्बोस गरिएको पाउनुहोस् ताकि ग्राहकहरूले धातुको बनावट महसुस गर्न सक्दछन्।
२ ज्यामितीय आकारहरू
चीजहरूको अधिक अमूर्त पक्षमा रहेको लोगो डिजाइन विकल्प खोज्दै हुनुहुन्छ?
जबकि हामी एक कडा दृष्टान्त मन पराउछौं, कहिले काहिं, ठूलो लोगो डिजाईनको साथ आउनु भनेको ती बच्चाहरुलाई "बिल्डिंग ब्लक" मा फर्कनु हो जुन तपाईले एक बच्चाको साथ खेल्नु भएको थियो।
तपाईले सर्कल, स्क्वायर र आयतहरू राम्रोसँग मान्यता प्राप्त छविहरू र डिजाइन तत्त्वहरूको नक्कल गर्न प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
यो नयाँ युग कम्पनीहरूका लागि उत्कृष्ट डिजाइन चाल हो, विशेष गरी हजार वर्षीय बजारलाई लक्षित गर्नेहरू।
यहाँ असंख्य रंग संयोजनबाट टाढा नजानुहोस्। आफूलाई अलग राख्नको लागि एक "अधिक, Merier" दृष्टिकोण अपनाउनुहोस्।
A. एक रेट्रो लुक
१ 1980 s० को हेयरस्टाइल लामो समय लाग्न सक्छ (र यसको लागि सद्भावना धन्यवाद) तर यो जंगली दशकको बारेमा केहि चीजहरू अवश्य पनि जीवित छन्!
२०१ 2019 को सब भन्दा ठूलो लोगो डिजाइन प्रवृत्ति मध्ये एक निओन लुक, बोल्ड फन्टहरू, र लुक-मा-म ग्राफिक्स सबै चीजहरू 80० को दशकसँग सम्बन्धित छ।
विचित्र रेखा र थोप्लाहरू, पेस्टल पिनहरू हाइलाइटर पहेलो नियनहरू, पशु प्रिन्टहरू, र पप आर्ट वीबको साथ केन्द्रीय छविहरूको अतिरिक्त सोच्नुहोस्।
जाँच गर्नुहोस् यो पोष्ट अलि बढी प्रेरणा पाउन।
एक ठुलो प्रवृति जुन २०१ 2019 का सबै भन्दा राम्रो लोगोहरू साझा छन्?
स्पेसिंगको साथ वरिपरि खेल्ने यो उत्तम तरिका हो, र यस प्रक्रियामा सेतो नकारात्मक ठाउँबाट बच्न। ओभरल्याप आकार र र colorsको संयोजनको माध्यमबाट, तपाईं एक सुन्दर डिजाईन सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ।
तपाईको डिजाइनमा थोरै आयाम थप्ने यो पनि एक उत्तम तरीका हो।
को साथ समाप्त हुनबाट बच्न एक महाकाव्य असफल, निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईं विभिन्न र colorsहरूमा भर पर्नुहुनेछ आकृतिहरू र छविहरूलाई छुट्ट्याउन जुन तपाईं ओभरल्यापको लागि छान्नुहुन्छ।
तपाईं पक्कै उही र family परिवारमा शेडका साथ ओभरल्याप गर्न सक्नुहुन्छ, तर निश्चित गर्नुहोस् कि त्यहाँ कुनै अलमल्लमा नपर्न एक फरक पर्याप्त छ।
यस तरीकाले सबैजना सजीलै तपाइँको डिजाइन को विभिन्न वर्गहरु को लागी सक्षम हुनेछ। अन्तिम चीज तपाईले चाहानुहुन्छ कि यो एक विशाल ब्वाब जस्तै लाग्न समाप्त भयो!
Details. विवरणहरू फेरि छन्
लोगो डिजाइन प्रवृत्ति मा विगत केहि वर्षहरु को लागी, धेरै ध्यान मिनिमलिज्म मा रहेको छ।
र जब हामी यो विचार गर्दछौं कि मिनिमलिज्मसँग अझै पनि यसको गुणहरू छन्, यदि तपाईं अधिक विस्तृत, अधिक-शीर्ष, र अधिकतम डिजाइन चाहानुहुन्छ भने, अब तपाईंको समय चम्किने समय हो।
सिधा लाइनहरू, क्लासिक टाइपोग्राफी, र कालो-सेतो लोगो जसले विभिन्न प्रकारका उद्योगहरूमा लोगोहरूमाथि प्रभुत्व जमाउँछ अल्ट्रा-विस्तृत डिजाइनको लागि मार्ग प्रदान गर्दैछ।
त्यसोभए, तपाईं कसरी एक नयाँ लोगो बनाउन सक्नुहुन्छ जुन पुनःआकार गर्ने बित्तिकै अव्यवस्थित नदेखिने हो?
गोरी स्पेसको राम्रोसँग प्रयोग गरेर, र तपाईंको समग्र डिजाइनमा दुई रंगहरू मात्र टाँसिदै।
Hand. हातले चित्रित दृष्टान्त
तपाईको नयाँ कम्पनीको लागि अविश्वसनीय रूपले अद्वितीय लोगो डिजाइन प्राप्त गर्ने मार्ग खोज्दै हुनुहुन्छ?
केन्द्रीय छविलाई तारांकित भूमिका खेल्न अनुमति दिने लोगो चाहानुहुन्छ?
सायद तपाई चाहानुहुन्छ कि कसैले तपाइँ वा तपाइँको लोगो डिजाइन मा तपाइँको व्यवसाय सुरु गर्न प्रेरित गर्ने व्यक्तिको चित्र बनाउन को लागी।
जे भए पनि, हातले खिचेका चित्रहरू २०१ for को लागि अविश्वसनीय लोकप्रिय प्रवृत्ति हो। तपाईं कार्टुन जस्तो लुक, पेन्सिल ड्रइ, वा अझ सार अमूर्त हातले चित्रण गर्न सक्नुहुन्छ।
ग्राहकहरु लाई मनपर्दछ कि तपाईंको लोगो केहि फरक गर्छ - र तिनीहरूले यसको अर्थ यो लिन्छ कि तपाइँको कम्पनी पनि बक्स बाहिर छ।
B. बबल पत्र
अर्को प्रवृत्ति जुन २०१ storm लाई आँधीबेहरीमा लिन निश्चित छ (कम्तिमा, लोगो डिजाइन को दुनिया मा):
हो, फन्ट जुन तपाइँले हाई स्कूल फुटबल खेलको लागि संकेत लेख्न वा तपाइँको लिम्बू पानी स्ट्यान्ड विज्ञापन को लागी प्रयोग गर्न मनपराउनु भएको ठूलो फर्कन्छ।
यो तीन आयामिक लुक सिर्जना गर्न एक उत्तम तरिका हो, र यसले रमाईलोको भावना संप्रेषण गर्छ। यो विशेष गरी बच्चाहरू, चाडपर्वहरू, वा पार्टी आपूर्त स्टोरहरु को लागी कम्पनहरु र सेवाहरु को लागी एक राम्रो फिट हो।
यदि तपाईं बबल अक्षर प्रयोग गर्नुहुन्छ भने तपाईंको लोगो डिजाइनमा र color्गीन धेरै अ emb्गाल्न डराउनु हुँदैन। त्यो केवल लहरीको अर्को अंश हो।
Design. नकारात्मक अन्तरिक्षमा लुकेका डिजाइनहरू
सबैलाई खोज्न उत्साहित मनपर्छ लुकेका सन्देशहरू र अर्थहरू सबै भन्दा प्रसिद्ध कर्पोरेट लोगोमा।
सोच्नुहोस् कि "AZ" अमेजन लोगोमा बदलेको छ, फेडएक्स लोगोमा एर्रो, वा बास्किन रोबिन लोगोमा लुकेका "31१" ले उनीहरूले प्रस्ताव गरेको आइसक्रीमका fla१ स्वादहरू जोड दिन्छन्।
कम्पनीहरूले छिटो महसूस गर्दैछ कि यी लुकेका सन्देशहरू उनीहरूको ब्रान्डमा रूचि ड्रम गर्न उत्तम तरिका हो।
नकारात्मक ठाँउको साथ युक्तिहरू प्रयोग गरेर, तिनीहरू लुकाउँछन् वा स्पष्ट रूपमा उनीहरूको लोगोको डिजाईन भित्र प्रासंगिक छविहरू, संकेतहरू, संख्याहरू, र अक्षरहरू समावेश गर्दछ।
कस्तो प्रकारको ईस्टर अण्डा तपाईको ग्राहकहरुका लागि खोजी गर्न बनाउनु हुन्छ?
यो सामाजिक मिडियामा प्रयोगकर्ताहरूसँग कनेक्ट हुनको लागि एक उत्तम तरिका हो। तपाइँको लोगो पछाडिको गोप्य अर्थ फेला पार्न तिनीहरूलाई चुनौती दिनुहोस्, र तपाइँ निश्चित हुनुहुन्छ एक समय मा एक प्रचलन शीर्षक बन्नुहोस्।
To। मूलमा फिर्ता
आधुनिक लोगो डिजाइन विगतमा एक नजर लिने बारे हो।
विशेष गरी यदि तपाईं लामो इतिहासको कम्पनी हुनुहुन्छ भने, हामी शर्त बनाउन तयार छौं कि तपाईले केही बर्षहरूमा फरक फरक लोगो डिजाइनहरू बनाउनु भएको छ।
कम्पनीहरू अब आफ्नो मूल डिजाइनमा फर्केर उनीहरूको ईतिहासमा जोड दिइरहेका छन्, प्राय: मिति थप्दै जुन व्यापार यसको मुनि सुरू भयो। यदि तपाईंको ब्रान्डसँग मूल स्टोरफ्रन्ट छ भने, लोगो जुन सन्दर्भ अघिल्लो दिनमा फर्केर हेर्ने अर्को तरीका हो।
यदि तपाईंसँग पुरानो लोगो छैन भने पनि, भिन्टेज लुक अपन गर्दै - सोच्नुहोस् १ th औं र २० औं शताब्दीको शुरुमा र सोच्नुहोस् भिक्टोरियन ग्राफिक डिजाइन शैलीहरू - ट्रिक गर्नेछ।
तपाईं छायाँ टेक्निकहरूमा पनि भर पर्न सक्नुहुन्छ तपाईंको लोगो डिजाइन बनाउन यो वास्तवमा भन्दा धेरै पुरानो देखिन्छ।
तपाइँको कम्पनी को प्रमाणित एक मजबूत, चिरस्थायी इतिहास तपाइँको ब्रान्ड वरपर भरोसा र विश्वसनीयता को भावना स्थापित गर्न को लागी एक उत्तम तरिका हो।
१०. बेसपोके टाइपोग्राफी
तपाईं यसलाई दोष यो इंस्टाग्राममा लगाउन सक्नुहुन्छ, सबैले विशेष महसुस गर्न चाहान्छन् भन्ने तथ्यमा, वा उदय कला विद्यार्थी बेरोजगारी मा।
यसको कारणले केहि फरक पर्दैन, वास्तविकता भनेको यो हो कि २०१ of को सब भन्दा ठूलो लोगो डिजाइन प्रवृत्ति मध्ये एक अनुकूलन गरिएको, बेस्पोक टाइपोग्राफीको लागि माग हो।
तपाईंको लोगोका लागि फन्ट जुन तपाईंको आफ्नै हो।
टाइपोग्राफी पेशेवरसँग काम गर्नुहोस् वा एक स्थानीय कलाकार भाँडामा फन्ट बनाउनको लागि जुन तपाईंको ब्रान्डको लागि अद्वितीय छ। सम्पूर्ण रूपमा तपाइँको ब्रान्ड मान्यता निर्माण गर्न, यो फन्ट तपाइँको वेबसाइट र अन्य प्रचार सामग्रीमा प्रयोग गर्नुहोस्।
यी मध्ये कुन लोगो डिजाईन ट्रेंडहरू तपाईं प्रयास गर्नुहुनेछ?
चाहे तपाईं पूरै '80० दशकको सौंदर्यलाई अँगाल्न तयार हुनुहुन्छ, धातुलाई एक चोटि प्रयास गर्नुहोस्, वा ज्यामितीय आकार र अनुकूलित टाइपोग्राफीको साथ वरिपरि खेल्नुहोस्, २०१ logo पक्कै पनि विकल्पहरूको अभाव छैन जब यो लोगो डिजाइन प्रवृत्तिहरूको कुरा आउँछ।
जब तपाई अन्धाधुन्ध प्रवृत्तिको अनुसरण नगर्नुपर्दछ, हामी आशा गर्दछौं कि यस सूचीले तपाईलाई राम्रोसँग बुझ्न मद्दत पुर्‍याएको छ कि कुन ब्रांडहरू तपाईको ब्रान्डका लागि उपयुक्त छन्।
एकचोटि तपाईंले उत्तम लोगोमा निर्णय गर्नुभयो, तपाईंले यसलाई उत्तम सम्भाव्य प्रकाशमा देखाउँदै यो निश्चित गर्नु आवश्यक हुन्छ।
जहाँ हामी भित्र आउँछौं।
हामी तपाईंलाई व्यापार कार्ड, पोष्टर, ब्यानर, स्टिकर, र अधिकको साथ मद्दत गर्न सक्दछौं।
अझै पनी तपाईको सही लोगोको कल्पना गर्न समस्या भइरहेको छ? हाम्रो ग्राफिक्स र लोगो डिजाइन सेवाहरू तपाइँलाई तपाइँको ब्रान्डको प्रतिनिधित्व गर्नको लागि आदर्श डिजाइन सिर्जना गर्न मद्दत गर्दछ।
सुरू गर्नका लागि हामीसम्म पुग्नुहोस्, र तपाईंको ब्रान्ड अर्को ठूलो चीज बन्नुहोस्।
Every सुझावहरू प्रत्येक फोटोग्राफी राती शुटि forको लागि आवश्यक हुन्छ
पुरानोसँग बाहिर, नयाँसँगै: शीर्ष संकेतहरू यो एक लोगो पुन: डिजाइन for को समय हो